FBC - Korichi kallattiiwwan kaa'e hojiirra oolchuuf ummanni yeroo laachu qaba -aadde Uummii Abbaa Jamaal
Korichi kallattiiwwan kaa'e hojiirra oolchuuf ummanni yeroo laachu qaba -aadde Uummii Abbaa Jamaal
Finfinnee, Gurraandhala 6,2010(FBC) – Koreen giddu galeessaa DhDUO ibsa baasen kallattiiwwan kaa'e hojiirra oolchuuf ummanni mootummaadhaf yeroo laachuu qaba jedhan itti aantuu hoggantuun Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa aadde Uummii Abbaa Jamaal.
Naannicha bakka tokko tokkotti daandii cufuu fi gabaa lagannaa, akkasumas miidhaa qaqqaberratti har’a ibsa laataniiru.
Aadde Uummin sochiin lagannaa gabaa, hojii dhaabuu fi daandii cufuu kaleessa bakka tokko tokkotti jalqabe gara jeequmsaatti geeddaramuusaa himaniiru.
Namoonni hidhaa jiran akka hiikamanii fi bu’uuraaleen misoomaa akka guutaman gaafatamuu kaasanii, hiriira gara jeequmsaatti geeddaramaa jiru keessa Baatuu, Laga Xaafoo fi Jimmaatti namoonni 8 miidhamaniiru jedhan aadde Uummin.
Konkolaattota dhuunfaa fi mootummaarrattis miidhaan qaqqabuu kaasaniiru.
Lammiilee naannoo Somaaleetii buqqa’anii kaampii Hammarreessaa keessa qubatan 4, Baale aanaa Madda Walaabuutti 3, ida’amaan namoonni 7 lubbuu isaanii dhabaniiru.
Mootummaan gaaffilee ummataa deebisuuf hojjechaa wayita jirutti rakkoon akkanaa uumamuun sirrii akka hin taane kaasuun; mootummaan gaaffilee ummataa deebisuuf ammas cimee akka hojjetu aadde Uummin himaniiru.
Mootummaan rakkoo uumame adda baasee tarkaanfii akka fudhatus himaniiru.
Ummannis waldhageettin mootummaa waliin jiru akka hin gufanne akka of qusatu gaafataniiru.
Koreen giddu galeessaa DhDUO ibsa tibbana baasen kallattiiwwan kaa'e hojiirra oolchuuf ummanni mootummaadhaf yeroo laachuu qaba kan jedhan aadde Uummin, rakkoon akka hin mudannes abbootin amantaa, abbootin Gadaa fi jaarsoliin biyyaa tasgabbiirratti hojjechuu qabu jedhaniiru.
Lubbuu namaa badeefis mootummaan naannichaa gadduu himaniiru.
Oduuwwan Biroo « Daandii fi daldala cufsiisun har’aa qabee dhaabbachuu qaba -Dooktar Abiy Ahimad	Obbo Baqqalaa Garbaafaan hiikaman »